परराष्ट्रमन्त्री महत स्वदेश फर्किए - Onlinesamaya.com
भदौ २८, काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणको तयारीका लागि भारत गएका परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत मंगलबार स्वदेश फर्किएका छन् । आइतबार नयाँ दिल्ली गएका डा. महत मंगलबार दिउँसो काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।
स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको भारत स्वागत गर्न आतुर रहेको बताए ।
भारत भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलगयातसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यही भदौ ३० गते भारत भ्रमणमा जाँदैछन् ।
प्रचण्डले बोलाउँदा पनि ओली र खनाल बालुवाटार गएनन्
रोटरी क्लव अफ बागमतीद्धारा विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामाग्री प्रदान